Xildhibaan katirsan Galmudug oo dowladda ka dalbaday in la soo qabto Askari Walaashiis ku dilay Muqdisho – Kalfadhi
Xildhibaan katirsan Galmudug oo dowladda ka dalbaday in la soo qabto Askari Walaashiis ku dilay Muqdisho
March 5, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Xaashi Daahir Diiriye oo katirsan Baarlamaanka Maamulka Galmudug ayaa walaac ka muujiyay dil Askari kamid Ciidamada Soomaaliya, sidoo kalane ilaalo ka ahaa Hotelka Shaamow uu shalay u geestay walaashiis Cadar Geelle.
Xildhibaanka ayaa sheegay in aanan wali la soo qaban Askarigii wax dilay islamarkaana aysan muuqan dadaal lagu soo qabanayo Askarigaasi sida uu hadalka u dhigay waxa uuna ku baaqay in dowladda Soomaaliya ay door ku yeelato soo qabashada ninkii dilka fuliyay.
“Wali lama soo qaban dambiilihii dilay walaashey waxaan codsanayaa in cadaalad ay hesho walaashey”, ayuu yiri Xildhibaan Xaashi Daahir oo katirsan Golaha Wakiilada ee Maamulka Galmudug.
“Waa qofkii 11aad oo aan qaraabo nahay oo ay Ciidamada toogtaan, ma jirto hal qof oo loo soo qabtay, cadaalad darro xoog leh ayaa dareemayaa”, ayuu u sheegay Kalfadhi Xildhibaan Daahir Diiriye.
Cadar Geelle Alle ha u naxariistee waxay aheyd Haweeney Naafo ah oo lacag gargaar ah u doonatay hoteelka taas oo ay bixineysay Hey’adda WFP. “Waxay ka tagtay carruur 10 kabadan oo agooman ah , maanta cid u maqan maleh”, ayuu yiri Xaashi Daahir Diiriye.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya dilalka ay geestaan Ciidamada Soomaaliya waxaana arintaan ay saameen ballaaran ku yeelatay dadka shacabka oo aan helin Xukun cadaalad ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata in ay ku guul-dareysatay wax ka qabashada dilalka ay fuliyaan Ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Sharmarke Garaad oo bogaadiyay qorshaha cusub ee ay ku wada-shaqaynayaan hay’adaha ku hawlan dhamaystirka Dastuurka
Guddiga la dalagaanka AIDs-ka ee Puntland oo dowladda ka codsaday in ay baaris ku sameeyaan eedaysanayaasha kufsiga u xiran